Mitambo nerutsigiro rwakawedzerwa. Yakanakisa ya2019 neLinux vhezheni | Linux Vakapindwa muropa
Mushure me hiatus inokonzerwa nefuru (yekumba, izvo zvinhu zvinotengeswa kubva kuChina hazvindikodzere) ino ndiyo nguva yekuenderera nerwendo rwedu rwemitambo inosarudzwa nevaverengi ve Kutamba PaLinux. Ini ndinodzokorora kukoka kuti iwe utiudze mune yekutaura fomu iyo ndiyo yaunofarira mitambo. Zvingave zvinonakidza kutanga 2021 nekugadzira yedu yega runyorwa pachinzvimbo chekutendeukira kunzvimbo dzekunze
Tichakamirira mhinduro yako, isu tichagadzirisa nekusarudzwa kwemitambo yekutsigira yakawedzerwa.
1 Yakawedzerwa mitambo yekutsigira. Zvakanakisa zvegore 2019 neshanduro yeLinux
1.1 Kufa Chiedza 2 (Winner)
1.4 Counter-Rova: Global Kurwisa
1.5 Eutro Rori Simulator 2
Yakawedzerwa mitambo yekutsigira. Zvakanakisa zvegore 2019 neshanduro yeLinux
Kufa Chiedza 2 (Winner)
Kutaura nezvehutachiona, mune ino kesi, isu tinofanirwa kurarama muguta rakaparadzwa nehutachiona hwe zombie. Panguva imwecheteyo, isu tichafanirwa kusarudza kuzadzikisa basa rakavanzika rakapihwa kwatiri nevakuru vedu kana kuponesa avo vasina hutachiona.. Haisi yekumanikidza, asi sarudzo dzatinoita dzinokanganisa matunhu makuru.
Mutambo Inopa rusununguko rukuru rwekufamba, uye tinogona kufamba pakati pezvivakwa tichiita parkour. Zvakatipoteredza, zvakasanganiswa nezvombo zvatinosarudza uye kugona kwedu, zvinopa akasiyana marudzi ekurwa. Zvakare ndima kubva masikati kusvika husiku inogona kuchinja zvachose mamiriro acho ezvinhu.
Neraki, tinogona kugara tichishanda pamwe nevamwe vatambi.
Mutambo wechipiri pane urwu runyorwa rwevakundi wakagadzwa papurazi. Mune ino kesi iyo nyaya inotanga kana mutambi achigara nhaka yasekuru vake uye achifanira kuitarisira achibatsirwa nematombo emaoko echipiri uye nemari dzesimbi.
Pakati pezvinhu zvinobvumidza mutambo Ndizvo:
Chinja minda yakasiiwa mupurazi reroto rako
Dzidza kurarama pasi: Chengeta mhuka, enda unobata hove, tarisa zvirimwa uye ugadzire mabasa emaoko.
Iva chikamu chenharaunda yemuno: Pelican Town inogara kune vanopfuura makumi matatu vagari kuti vave shamwari
Sangana nemumwe munhu akakosha. Kune vanhu gumi nevaviri vanodanana.
Ongorora mapako akakura uye asinganzwisisike; Mhuka dzine njodzi uye pfuma inokosha inogona kuwanikwa munzvimbo dzakadzika.
Stardew Valley ine akawanda maitiro ekugadzirisa.
Kana iyo munda isiri yako chinhu, ngatiedzei imwe mamiriro With mutambo uyu iwe unofanirwa kuve wakagadzirira kuongorora, kutsvaga nekudyidzana nemhando dzakasiyana siyana uchifamba nemumenyeredzi. Iwe unogona kutumira zvikepe zvesainzi kuti zviongorore uye zviongorore kuti zviite yako galactic empire. Zvichakadaro, ngarava dzako dzekuvaka dzichagadzira zviteshi pamapuraneti achangobva kuwanikwa. Tsvaga hupfumi hwakavigwa uye zvishamiso zvegalactic apo iwe paunosarudza idzo nharaunda inotora uye nekugadzira kusakwana uye zvirongwa zvevanoongorora.
Yakanyatsotsanangurwa uye chaiyo nzvimbo mifananidzo.
Rudzi runogadziriswa Ramba uchifunga kuti kudyidzana ndiyo nzira yekuita navo.
Counter-Rova: Global Kurwisa
Icho chiri pamusoro vhezheni yakagadziridzwa zvakanyanya kubva muvhidhiyo mutambo wekare.
Counter-Strike: Global Inogumbura (CS: GO) inowedzera pane timu-yakavakirwa-yekutanga-munhu shooter mutambo wakapayona neiyo yekutanga Counter-Strike payakaburitswa muna 1999. Zvikwata zviviri zvinokwikwidza mumatanho mazhinji e chinangwa-akavakirwa mutambo modhi nechinangwa chekuhwina materu akakwana kuhwina mutambo.
CS: GO inoratidzira mamepu matsva, mavara uye zvombo uye inopa akagadziridzwa mavhezheni echinyakare Counter-Strike mamapu saDust, Hell, Nuke, Tren uye nezvimwe. Pamusoro pezvo, CS: GO inounza mhando nyowani dzemitambo senge Gun Race, Flying Scout, uye Aviator Man, uye inoratidzira online matchmaking uye Yemakwikwi Makwikwi epaMadziva.
Eutro Rori Simulator 2
Kana isu tisingakwanise kunyunyuta nezve chimwe chinhu mune ino runyorwa, iko kushomeka kwemhando dzakasiyana. Isu tinouraya zombies, isu tinorima purazi, isu tinotungamira kukunda kwenzvimbo, uye ikozvino isu tinogona kutyaira rori.
Pane vhiri rerori isu tichafamba tichiyambuka Europe tichiendesa zvinhu zvakakosha pamusoro penzvimbo refu. Izvi zvichatibvumidza kushanyira akawanda emaguta muUK, Belgium, Germany, Italy, Netherlands, Poland nedzimwe nyika mukondinendi. Dambudziko richaedza kuramba, hunyanzvi uye kumhanya kwemutyairi.
Mhando dzakasiyana dzenhumbi kutakura kuburikidza anopfuura makumi matanhatu maguta eEuropean.
Kugadzirisa rako pachako bhizinesi uye marori zvikepe
Kugadziriswa kwemaitiro erori uye mashandiro.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Mitambo nerutsigiro rwakawedzerwa. Yakanakisa ya2019 neshanduro yeLinux